Rosca de Reyes: Mihoatra Noho Ny Mofomamy Iray Ho An’ireo Mpanjaka Telo · Global Voices teny Malagasy
Rosca de Reyes: Mihoatra Noho Ny Mofomamy Iray Ho An'ireo Mpanjaka Telo
Voadika ny 10 Janoary 2016 15:01 GMT
Rosca de Reys tamin'ny fankalazana ny Dia de Reyes – andron'ny Reys. Flickr/Loren Javier. CC 2.0
Navoaka voalohany tao amin'ny bilaogy Lupitanews ity lahatsoratra ity.
Ohatra ny toa tsy ampy ny fahafinaretana nandritra ny fetin'ny noely sy ny faran'ny taona, mbola tsy tapitra ihany koa ny fialantsasatry ny ririnina — farafahakeliny tsy ho an'ireo fianakaviana izay mankalaza ny Andron'ireo Mpanjaka Telolahy ny 6 Janoary. Manamarika tantaram-pivavahana navadika ho fomba amam-panao tsara, izay hita hatramin'ny vanimpotoana fahagola ny “Dia de Los Reys”, nekena tao Frantsa sy Espàna, ary nentin'ireo espaniola Conquistadores mpanjanaka nankany Meksika.
Araka ireo fampianarana katolika, tamin'ny fanarahana kintana manjelatra iray, “La Estrella de Belén,” nandeha tany jerosalema sy Betlehema i Melchor, Gaspar, sy Baltasar mba hihaona tamin'ny mpaminany izay vao teraka vao haingana. Jesosy io zazakely io, ary nahazo volamena, ditin-kazo manitra, ary miora izay nentin'ireo mpanjaka telo ho azy.
Nandray ny Día de Los Reyes ho zava-dehibe ny Meksikana, sady namadika an'io ho sahala amin'ny fety fankalazana eo anivon'ny mpianakavy sy ireo namana akaiky, manome voninahitra ireo ankizy izay mahazo fanomezana. La Rosca de Reys (mofomamin'ny Mpanjaka) no ivon'ny fihaonana — mofomamy iray mafilotra, zavamamy voaravaka voankazo ‘coings’ namainina sy nomamiana, voasary makirana, paiso, ary ireo voankazo hafa toy ny serizy. Nampiarahana tamin'ny sôkôlà mafana Meksikàna na “atole” izy io (ireo zava-pisotro Meksikàna roa dia nolovàna avy amin'ireo foko fahagola na “antepasados”).
Ao anatin'ny “rosca”, izay mitovy amin'ny mofo dônaty iray lehibe, hahita sary kely vita amin'ny plastika ny olona. Na iza na iza mahazo azy io dia tsy maintsy hanao fety miaraka amin'ny “tamales” ny 2 Febroary, izay tsy inona fa El Dia de la Candelaria, fety iray hafa fankalàzan'ny katolika .
Lehibe tao Sonora sy Sinaloa, Meksiko, aho, hitako isantaona isantaona ny tenako sy ireo hafa mihinana io mofomamy matsiro io, ary mahazo peratra na fanosehana iray. Araka ny finoana malaza, ny dikan'ilay voalohany dia fampakaram-bady tsy ho ela! ary ny faharoa mazava loatra, mijanona ho tokantena ianao – toy ny ao anatin'ilay “solterona” mankaleo.
Ho an'i San Francisco maoderina, naka ny fombandrazana sy nanova azy ireo Latinos avy amin'ireo zom-pirenena rehetra. Raha manolotra karazanà fahasamihafàna maro ny ao San Francisco Bay Area, dia mbola hita hatrany kosa ny mofomamy, indrindra indrindra eny amin'ireo Meksikana mpivarotra mofomamy, izay izy irery no manana ny endrika zazakely amin'ny plastika. Matsiro ny mofomamy, manana dikany mamy izy, sady tena milay an, manome anao antony iray hanohizana foana ny fankalazàna ilay izy!
Mirary Dia de Los Reyes sambatra e!